အန်းဒရွိုက် GPS စနစ် & ခရီးသွား Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ
Category: - ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ
မှာရရှိနိုင်သည့်ဂျီပီအက်စ် apps များအားလုံးသည် Apps ကပ APK ကို , အနီးအနားမှာသင့်ရဲ့အတိအကျတည်နေရာနဲ့ရှာဖွေရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသိရမယ့်အတိုဆုံးခရီးသွားလာမှုလမ်းကြောင်းများဖန်တီးနေတဲ့အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုမှာ ထား. , လမ်းညွန်နှင့်သင်၏လမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါဆက်ပြောသည်စွမ်းရည်နှင့်အတူအားလုံးအခြေခံအညွှန်း options များဆက်ကပ်။ သူတို့ကအစကိုအောင်မြင်စွာသင့်မိုဘိုင်းနှင့်တိမ်းညွတ်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, ငါတို့သည် GPS နှင့်ခရီးသွားအပလီကေးရှင်းများ သင့်နယ်လှည့်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။
အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုနှင့် menu ကိုဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားစေခြင်းငှါပေမယ့်ဒီ app များကိုသင်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အသာပုတ်ပါရန်မလိုဘဲတည်နေရာကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂါရပ်အားလုံးရှိသည်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပြီးသားသင့်တည်နေရာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အနီးအနားရှိင်ပြောပြရန် Google Maps ရှိသည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုရပ်တန့်နှင့်စစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ချိန်သင်ကနှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုအကောင်းဆုံးအချို့ဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ GPS နှင့်ခရီးသွားအက်ပ်များသငျသညျကိုသှားအဖြစ်မှန်မှန်သူတို့အားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြေညာနိုင်သည့်။ သင်ရုံသင်ကသွားကြသည်ရှိရာဦးတည်ချက်ပေါ်တွင်သင်ပဲ့ပြင်ရန်သင့် app ကိုပြောပြရန်ရှိသည်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးအလုပ်များနှင့်စည်ကားမြို့လယ်ဧရိယာပေါ် updated စောင့်ရှောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, သို့မဟုတ်ပါကကြီးမားတဲ့ကားရပ်နားအများကြီးဖြတ်ကူးမှကြွလာသောအခါ။
ဤရွေ့ကား apps များမှာလည်းလမ်းများဒီနေရာကိုဖြတ်ကူးနှင့်သုံးမှ, သင်အလှည့်-by-အလှည့်လမ်းညွန်ပြောပြနှင့်သင်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းပြောပြပါ။ ဤရွေ့ကား apps များကိုလည်းသင်ဖြတ်သန်းတစ်ခုချင်းစီကိုလမ်းသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာနှင့်နာမကိုအမှီရောက်ရှိဖို့အကွာအဝေးပြောပြပါ။ သူတို့ကအစအခြိနျမှနျမှအနီးဆုံးဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းသင့်ပြောပြပါ။ ဤနည်း, သင်တိကျတဲ့အချက်ရောက်ရှိဖို့ခရီးရန်ရှိသည်မည်မျှသိကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုညာဖက်သို့မဟုတ်လက်ဝဲဘက်မှာလာရှိမရှိသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
နည်းပညာကျနော်တို့သွားလာသည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲဘို့ရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့ကစျေးပေါစျေးနှုန်းများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်များနှင့်ဟိုတယ်များစာအုပ်ဆိုင်မှအမှုအရာကိုစုစည်းပြီးမှကြွလာသောအခါကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီရာများစွာကိုအခမဲ့မိုဘိုင်း apps များ, ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ဤအ apps များခင်မှာ, မိသားစုနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောခရီးစဉ်များအတွက်စီစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်စီစဉ်ဖို့တိုင်းအရာများအတွက်ခရီးသွားအေးဂျင့်များပေါ်တွင်မူတည်ခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းတာကအဲဒီအတိတ်၏အရာဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုသင်အလွယ်တကူသင်တို့ဆီသို့ခရီးထွက်ချင်သည်ခပ်သိမ်းသောမြို့၏နာမည်ကျော်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းကိုသင်ပြောပြကြလိမ့်မည်သည့်အတော်ကြာခရီးသွားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ခရီးသွား app များကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား apps များမှာလည်းဟိုတယ်ဘွတ်ကင်း၏စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအထူးလျှော့စျေးကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်မှကြွလာသောအခါခရီးသွားတွေထက်ပို 85% ခရီးသွား app များကိုသုံးပါ။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာရှိသမျှအစီအစဉ်များစေနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့သည်ဤ app များကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းကိုသင်ရှိရအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများမှာနေရာထိုင်ခင်းများအတွက်ဟိုတယ်အခန်းဘွတ်ကင်များနှင့်ပင်အပန်းဖြေများအတွက်အငှားသို့မဟုတ်မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာအုပ်ဆိုင်ရန်သင့် destination သည်, စာအုပ်လက်မှတ်တွေကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေဖို့တစ်ဦးချင်းစီကိုအခြား app ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုကအရမ်းခန့်မှန်းရခက်သည်အဘယ်မှာရှိတောင်ကုန်းဘူတာမှာရာသီဥတု updates များကိုဤ apps များရရှိနိုင်တချို့ဆုကြေးငွေ features တွေကိုလည်းရှိပါတယ်။ ရာသီဥတုသင့်လျော်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးအရပ်မှဦးတည်ခြင်းမပြုမီ, သင်သိပါလိမ့်မယ်။
EQInfo - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ...
The Sun Ephemeris (နေဝင်ချိန် ...
Tube မြေပုံ: လန်ဒန်မြေအောက် ...
Speedometer: GPS၊ အကွာအဝေး ...
ဂျီပီအက်စ်မြန်နှုန်း: အော်ဒီမီတာ: ...
အသံ GPS လမ်းညွှန် ...
Parkify - အဘယ်မှာရှိငါ့အသည် ...
လေကြောင်းလိုင်း Manager ကို -...
နယူးယောက်မြေအောက်ရထား - တရားဝင် ...
အဆိုပါလေတပ်အတွက် App ကို - ခရီးသွား ...